घिमिरेको खुलासा : ओलीलाई भ्रष्टाचारले तान्छ, ज्ञानेन्द्र राजा बन्ने सम्भावना छ , भिडियो सहित…हेर्नुहोस!
काठमाडौं, ९ फागुन । बरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पूनः राजा बन्ने सनसनीपूर्ण खुलासा गरेका छन् ।नेपालीहरुले निर्णय गर्न पाए पूर्वराजा शाह यो देशको राजा बन्न सम्भव रहेको उनको तर्क छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच वर्ष नै काम गर्न नपाउने उनको दा,बी छ । उनले भने,‘केपी ओलीलाई नै भ्र,ष्टाचारले तान्छ । नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति छा,नबिन भयो भने त्यसैले उहाँलाई लान्छ । र, यो जग्गा छा,नबिन हुन्छ नै ।’
गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपनि यो कमिशनको टेप प्र,करणमा कसले छानबिन गर्ने हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । बिहीबार राति प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै पत्रकार घिमिरेले यस्तो बताएका हुन् । उनले यो प्र,करणमा निश्पक्ष र स्वतन्त्र छा,नबिन हुनुपर्ने माग गरे ।
उनले भनेका छन्,‘उहाँले छा,नबिन होस भनेर राजीनामा गर्नुभएको छ। तर, छानबिन कसले गर्छ, संसदले गर्छ वा संसदीय समितिले गर्छ ?
हामीहरुको मूलुकमा एउटा सबभन्दा ख,तरनाक परम्परा के छ भन्नुहोला भने यस्ता विषयहरुमा छा,नबिन गर्नु भनेको ती विषयलाई दबाउनु हो । दो,षीलाई का,रबाही नगराउनु हो ।’